कार्तिक ११, २०७८ बिहिबार 219
काठमाडौ । अमेजन डेलिभरी गर्लले झाडीमा पार्सल लुकाएर राखेको भिडियो भाइरल भइरहेको छ । भिडियोमा देख्न सकिन्छ कि कसरी डिलिवरी गर्लले पहिले पार्सल ढोकामा राख्छिन्, तर एकै छिनमा उनले पार्सल उठाए र झाडीमा लुकाइन्। आउनुहोस् जानौं यसको पछाडिको रोचक कारण।।।
डेली मेलका अनुसार यो भिडियो अमेरिकाको ओक्लाहोमाको हो । जसमा एउटी डेलिभर गर्ल ढोकाको छेउमा पार्सल राखेर डिलिवरी तस्विर क्लिक गर्न गइरहेकी छिन्, तब मात्र डोरमेटमा केही लेखिएको देख्छिन् । जसलाई पढेपछि उनले पार्सल उठाइन्।
वास्तवमा, डोरमेटमा लेखिएको छ( ुकृपया श्रीमानबाट यो पार्सल लुकाउनु पर्नेछ । त्यसपछि अमेजन डेलिभरी गर्लले निर्देशन पछी पार्सल लुकाउँछिन्। उसले घरको छेउको झाडीमा पार्सल राख्छिन् र डेलिभरीको फोटो क्लिक गरेर छोड्छिन्
यो पूरै घटना ढोकामा जडान गरिएको क्यामेरामा रेकर्ड भएको थियो। जुन महिलाले टिकटकमा अपलोड गरेकी थिइन् । जहाँ यो भिडियोलाई मिलियन भन्दा बढी लाइक प्राप्त भएको छ। प्रयोगकर्ताहरूले डेलिभरी गर्लको तारिफ गरिरहेका छन्।
एन्टामा मा पोस्ट गरिएदेखि, क्लिप धेरै सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा साझा गरिएको छ। अन्त्यमा यो भिडियो डेलिभरी गर्लसम्म पनि पुग्यो । डेलिभरी गर्लको नाम लिजा हल हो, उनले सहयोग गर्ने जनतालाई धन्यवाद दिएकी छिन् ।
Prevकुलमानको अर्को च’मत्कार : घ’ट्यो बिधुत महसुल, प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ५० पैसा मात्र हेर्नुहोस् !!
Nextधनकुटामा के भयो यस्तो ? घ,ट्यो डरलाग्दो घ,टना , ३ जनाको अबस्था कस्तो छ ?
प्रे,मीसँग हो,टलमा बसेकी मोरङ उर्लाबारीकी तनुजाको श,व फे,ला